Home News Xog: Qatar oo qorsho halis ah la damacsan sidii shacabka Soomaaliyeed loo...
Xog: Qatar oo qorsho halis ah la damacsan sidii shacabka Soomaaliyeed loo caburin lahaa
Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in dowlada Somalia ay heshiis dhanka tayeynta Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugida Somalia la gashay dowlada Qatar.
Heshiiskan oo muhiim loo arko ayaa waxaa muddo laga joogo Seddex bil galay dowlada Somalia ee hadda jirta oo xiriir fog la leh dowlada Qatar ee uu hoggaamiyo Sheikh Tamim Bin Xamad Al Thaani.
Dowlada Qatar oo horay ballanqaadyo dhowr ah ugu sameysay Somalia, ayaa lasoo warinayaa in iminka ay fulinta balamahaasi ka bilaabi doonto tayeynta Sirdoonka Somalia, sida aan xogta ku heleyno.
Heshiiska ayaa dhigaaya in dowlada Qatar ay la wareegeyso bixinta mushaaraadka iyo tayeynta Hay’adda NISA oo loo arko inay ka ahmiyad badan tahay hay’adaha kale ee ka jira dalka.
Heshiiska ayaa waxaa qeyb ka ah in dowlada Qatar ay dib usoo nooleyneyso Hay’adda Nabadsugida Somalia, iyadoo lala meel-dhigaayo nidaamyada ay ku shaqeeyan Hay’adaha kale ee Sirdoonka adduunka.
Amiirka Qatar, Sheikh Tamim Bin Xamad Al Thaani oo siyaabo kala duwan uga hadlay ballamaha ay wada galeen Somalia, ayaa sheegay inay ku xeeran yihiin jihooyin kala duwan, waxa uuna ballanqaaday in Somalia ay ka garab istaagi doonaan dhinacyada amniga iyo Sirdoonka.
Tamim Bin Xamad, waxa uu sheegay in Somalia ay baahi u qabto in laga garab istaago amniga oo uu cadeeyay inuu yahay indhaha dal dhisan.
Dowlada Qatar ayaa Somalia xooga saartay wixii ka danbeeyay taageerada ay u muujisay xiliga ay u midooben dowladaha leysku dhaho xulafada Sacuudiga.
Sidoo kale, Dowlada Somalia oo u muuqata mid ilaashaneysa heshiiska iyo ballanqaadyada Qatar ay ka meermeereysa eedaha Khaliijka eek u aadan in Somalia aysan dhexdhexaad ka aheyn Khilaafka xulafada iyo Qatar.
Si kastaba ha ahaatee xiriirka dowlada Somalia iyo Qatar ayaa iminka ah mid wanaagsan waxaana suuragal ah in Qatar ay waxbadan ka bedesho Siyaasada ay la cayaareyso Somalia.
Previous articleSharif Xassan iyo Xassan Kheyre oo heshiis ka dhan ah MW Farmaajo wada galay. Waa maxay Heshiiskaas?
Next articleDowlada Turkiga ayaa diiday codsigii kaalmeynta daqliga dowladda Fedaraalka Somaliya
Dagaal ka Soconaayo Deegaanka Daac-dheer Ee Gobolka Galgaduud
Magalada Hargeysa oo Haan shidaal Laga Heley Sedex Ruux oo Midi...